Ho An’ny Olon-tsotra Iray Mpanao Gazety Any Hong Kong, Nahoana No Lasa Loharanon-Tahotra Ny Hoe Lasa Malaza Be Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2014 14:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Español, English
Mitantara ny tahony i Hung Lai Fong, mpanoratra vao tafiditra vao haingana ao amin'ny sehatra median'ny olon-tsotra inmediahk.net, raha nahita ny lahatsorany lasa malaza be ao amin'ny Aterineto any amin'ireo media sosialy ao anatin'ny lahatsoratra arahana an'ny inmediahk.net. Nalefa ny 24 Novambra 2014 ilay lahatsoratra amin'ny teny Shinoa, ary nadikan’i Cheung Choi Wan tamin'ny teny Anglisy.
Ankoatra ireo olona vitsy izay manana fahatsapàna lehibe ho manana andraikitra, maro ireo olona tsy tia hanao sorona ary tsy tia ny fiainany ho voakorontana. Tsy tia hanary ny zavatra rehetra ananany izy ireo ho an'ny ho avy mbola tsy fantatra akory. Mety tsy hanam-petra ny tahotra — tsy maninona hoe mety tsy mitombina akory io. Izany ny zava-misy marina. Tokony hekentsika hoe mety io no antony tsy hanohanan'ny vahoaka sasany ao Hong Kong ny hetsika. Aza mba henjehana ho tia tena re izy ireo azafady. Samy manana ny fomba fisainany ary ny olany manokana avy ny olona. Tsy misy tokony hitsikeràna ny hafa avy amin'ny fomba fisainana ambony kokoa. Ny tokony hataontsika dia ny manampy azy ireo hanatanteraka ny tena dikan'ilay Hetsika Elo.